श्रीलंकामा अनियन्त्रित बन्दै प्रदर्शन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २७, २०७९ एजेन्सी
काठमाडौँ — श्रीलंकामा केही महिनादेखि जारी आर्थिक संकटका बीच राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । केही दिनयता ठूला प्रदर्शनसँगै हिंसात्मक गतिविधि बढेका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०९:२७
पूर्वी पहाडमा बिरामी जाँच्दै डा. केसी
वैशाख २७, २०७९ कुम्भराज राई
ओखलढुंगा — देश स्थानीय तह निर्वाचनले तात्तिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी भने झोला बोकेर पूर्वी पहाडी जिल्लामा पुगेका छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै हिँडिरहेका छन् । सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालमा तीन दिन हाडजोर्नीलगायतको स्वास्थ्य परीक्षण सकेर उनी आइतबार रुम्जाटार पुगेका छन् । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म रुम्जाटार जिल्ला अस्पतालमा बसेर बिरामी जाँच्नेछन् । त्यसपछि खोटाङ, भोजपुर हुँदै संखुवासभा जाने उनको योजना छ । ‘देशका सबै जिल्लामा पुगिरहेकै छु,’ डा. केसीले भने, ‘१३ वर्षअघि ओखलढुंगा आएको थिएँ, फेरि आइपुगेको छु ।’
कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै डा. केसीले यो समय जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य कोर्ने समय भएको बताए । ‘मैले जिल्लामा हिँड्दा चुनावको उत्साह र उमंग देखेँ, त्यो देख्दा खुसी लागेको छ,’ डा. केसीले भने, ‘भ्रष्ट र आपराधिक मानसिकताका नेतालाई जवाफदेही बनाउने बेला यही हो, नेताले जनतालाई पंगु बनाएर राखेका छन्, त्यसैले इमानदार र चरित्रवान नेता छान्ने बेला हो यो ।’
स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५० प्रकारको र जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारको औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर देशभरि नै १२–१४ प्रकारको औषधिभन्दा नपाइने गरेको उनले बताए । जसले पेट काटेर कर तिरेका छन्, त्यो करले नेताले महँगो अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेको केसीको आक्रोशयुक्त भनाइ छ । ‘त्यही नेताले ऐनले तोकेको औषधि जनतालाई दिन सकेका छैनन् ।’ उनले थपे, ‘जसले नेता बनाए उसलाई औषधि पनि दिएको छैन । उनीहरूले बाँच्ने अधिकार छैन ?, नेताहरू जनताप्रति कति जवाफदेही भए ? यसको निर्णय गर्ने बेलाको रुपमा मैले यो निर्वाचनलाई लिएको छु ।’
जसले धोका दिएका छन् उनीहरूलाई भोट दिन नहुने डा. केसीले बताए । नेपालीहरू सरल स्वभावका भएकाले बेबकुफ बनाउने गरेको केसीले बताए । दुर्गम जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अझै करारका चिकित्सकले अस्पताल चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । चिकित्सक भएकै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक उपकरणहरू नभएको, स्तरोन्नति नभएको र सुदृढीकरण नभएको केसीको बुझाइ र भोगाइ छ । स्वास्थ्यकर्मीले मात्र काम गरेर नहुने डा. केसीले बताए । राज्यले गर्नुपर्ने धेरै काम हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०९:१५